Istaraatiijiyadaha dib u habeynta SEO-ga ayaa saameyn doona 2019?
Haddii aad jeceshahay inaad ku sifeyso natiijooyinka raadinta Google sanadka soo socda, markaa qodobkan ayaa kuu noqon doona mid waxtar leh. Waan ka wada hadli doonaa wixii isbeddel ah ee naga sugaya 2018 iyo xeeladaha tijaabada ah waa in aan fulino si aan u helno natiijooyin xitaa ka wanaagsan sanadka soo socda.
Diirad gaar ah ayaa loo bixin doonaa dhismaha isku xirka sida had iyo jeer wuxuu ku soo gashay qayb muhiim ah oo ah qaabka Google iyo waa in lagu dhejiyaa wadada ololeynta website-kaaga.
Qaar ka mid ah takhasuska SEO ayaa sheeganaya in dhisidda isku xirnaanta ujeedooyinka SEO aysan micno lahayn; Qaar kale waxay ku doodaan in doorka dhabarka ee bogga internetka uu si joogto ah u kordhay sanadaha. Aragtida kala duwan ee aragtida xagga wajigan waxaa lagu sharxi karaa iyada oo la kala jaray hawlaha xaddiga isku xirka iyo xaddidaadda isgaadhsiinta isku xirka. Waxaa intaa dheer, cusbooneysiinta Google Penguin si isdabaare ah u beddeshay doorka dhabarka ah ee SEO, taas oo ka dhigaysa mid aad u dhib badan si aad u hesho juice link to website ah. Si kastaba ha noqotee, fikradahaas iyo taxaddarradu waxay ka fog yihiin runta. Dhismaha xidhiidhka ayaa wali ka ciyaaraya kaalin muhiim ah ee bogagga shabakadda liiska waxayna keeneysaa joogitaanka ganacsiga SERP.
Waqtigaan, maalmaha farsamooyinka dhismaha xiriiriyaha spammy ayaa bixiyay natiijo fara badan. Maanta, tayada xiriirada soo galaya waxaa lagu qiimeeyaa ka sarreeya tiradooda iyo waxay ku darsan kartaa dadaalkaaga SEO. Intaa waxaa dheer, abuurista faa'iido leh dadka isticmaala ma aha oo kaliya lagama maarmaan laakiin sidoo kale istaraatijiyad faa'iido leh si loo dhiso xiriiryo si sare loogu qaado natiijooyinka raadinta. Waxaad ubaahan tahay inaad kor u qaaddo nuxurkaaga si aad u hesho dhagaystayaasha saxda ah kuna daabac meelo muhiim ah. Maaddaama dhabarka dambe loo tixgelinayo inuu yahay kantaroolka Google, ayaa ku fashilmay in uu sidaa sameeyo si aad u xaddidan dadaalka ku oolinta mashiinka raadinta.
Weligaa ma yaabtay waxa noqon doona isbeddelada cusub iyo casriyeynta aan ka ogaan karno dib u eegista SEO-ga ee 2019? Maqaalkani, waxaad ka heli doontaa qiyaaso dhowr ah sanadka soo socda iyo hababka kaa caawin doona inaad la socoto dukumiintiga tartanka suuqa tartanka.
Maahan weli waa boqorka
Ka hor intaadan bilaabin raadinta fursadaha dhismaha xiriirka iyo
Tactics SEO backlinks 2019 adoo gaarsiinaya dadka isticmaala martida martida, waxaad u baahan tahay inaad sameysid cilmi-baaris ku salaysan oo tayo leh si aad u siiso akhristayaashaada kartida leh sababta ay uheli lahaayeen isku xirka boggaaga. Haddii aad bilowdo inaad hesho juice link ka ah bogga rasmiga ah, waxay muujinaysaa in content aad leedahay qiimo weyn oo akhristeyaashu waxay helayaan xiiso. Maalmahan, mashiinnada raadinta waxay noqdaan kuwo caqli badan oo xitaa qiimeyn kara tayada iyo midnimada maaddooyinkaaga. Ma ahan wax ku filan in la abuuro farriimo badan, waxaana rajeyneynaa inay si weyn u sameyn doonto oo keliya sababtoo ah tirada erayada aad qoreyso. Xilligaan iyo sanadaha soo socda, xaalada waa isku mid. Google wuxuu u baahan doonaa tayo sare iyo cilmi-baaris ku saleysan oo loo isticmaalo dadka isticmaala, ma aha boodboodka raadinta.
Boodhada martida ayaa weli ah mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud uguna faa'iido leh ee lagu qaadi karo gaadiidka tayada goobtaada. Waa hab ku habboon, warshad khaas ah iyo hab dabiici ah si loo keeno taraafikada la beegsanayo goobtaada. Waxay fursad u siineysaa ganacsiyada in ay calaamadiyaan ganacsigooda ayna noqdaan hoggaamiyeyaal hoggaamiya suuqa.
Si aad u abuurto posts tayada blog-kaaga sidoo kale faa'iido u leh SEO-gaaga. Si kastaba ha noqotee, soo dhajinta boggaga martida ah ee la xidhiidha barta casriga ah ee hore u haysta macaamiisha badan iyo akhristayaasha caadiga ah waxay noqon doonaan hab wax ku ool ah oo lagu sawiran karo gaadiidka haddii aanad awood u lahayn. Waa macquul inaad ku sameyso bogag kala duwan oo isku mid ah. Sidaa darteed, blog-ga martida ah wuxuu u adeegaa sidii kor u kicinta bogga ee aan u baahnayn maalgashiyo muhiim ah oo keenaya natiijooyin tayo leh Source .